SEO na SEO ọhụrụ | Martech Zone
SEO anwuola. Ekwuru m na ihe karịrị otu afọ gara aga, m ka nwere ụfọdụ ndị SEO na-ewe iwe na-aza ajụjụ na post kwa izu. Google gara n'ihu ịpị anyị egwuregwu SEO ndị folks na-egwu iji kpọọ ọkwa ndị ahịa ha - na ọtụtụ n'ime ha ka na-ata ahụhụ taa. Ndi nke anyị dọpụtara ndị ahịa anyị n’ọkụ na-eme nke ọma.
M nwere agwakọta mmetụta na nke a infographic si Ọnọdụ. Ọ bụ ezie na anaghị m ekwenye na nke ọ bụla SEO ohuru azum, M n'ezie nwere ike mgbe na-akpá ha New or SEO atụmatụ niile.
Nke a abụghị SEO ohuru.
Ọ dị n'ịntanetị, ọdịnaya, na usoro mmekọrịta mmadụ na ndị ọzọ anwalela tupu SEO egbuo SEO. Enwere m olileanya na ndị ọkachamara SEO na-amụta atụmatụ ndị ahụ Ọnọdụ akwụkwọ nke ọma ebe a iji mee ka njikọ aka na ntụgharị gaa na akara ha. Enweghị m nchekwube nyere SPAM kwa izu anyị na-enweta site n'aka ndị ọkachamara nkwa ogoOtú.
Nkwado na infographic a dị mkpụmkpụ ebe ọ bụ na ha anaghị aza maka ndị na-ajụ ase, yana, na mgbawa nke ekwentị. Inye usoro site na ndi ozo di iche iche, uzo na atumatu (ocha, ebook, infographics, vidiyo) di nkpa iji nlebara anya na ahia gi na ugbua. Ya niile na-apụta n'ime ọchụchọ gị.
M na-agwakarị ndị na-eti mkpu na SEO bụ nsogbu mgbakọ na mwepụ ma ndị ukwu dị ukwuu na mgbakọ na mwepụ gravitated kwupụta ụlọ ọrụ ahụ. Ire ahia bu nsogbu mmadu, n’agbanyeghi, ma choro oru mmadu. Ọtụtụ n'ime ndị a New Atụmatụ dịpụrụ adịpụ na ikike nke ndị ọkachamara SEO nke m rụburu ọrụ n'oge gara aga.
Tags: ịde blọgụngosipụta ikaakakabaredeụlọ ọrụ ịde blọgụisiokwu usoroisiokwu isiokwunjikọ ịkpatanjirimara nke onweEgonjikarịcha ọchụchọsearch engine njikarịchaAelekọta mmadụ okporo ụzọonye ọrụ aka
FIITJEE Nwere Oke
Dee 28, 2013 na 7: 38 AM
Nke a dị mma n'ezie.
Kedu ihe na-adọrọ mmasị ma na-enye aka ị nwetara ebe a. Ekwesịrị m ịsị na mụtala ihe ọhụrụ na infographic ịkebere ebe a. Aga m eso ndị enyi m kerịta post a nke gị na m na-atụ anya n'ezie ịgụ ọtụtụ akwụkwọ ọhụrụ gị.